शिक्षक तालिम कता हराउँछन् स¬ीप ? - Shikshak Maasik
शिक्षक तालिम कता हराउँछन् स¬ीप ?
by • • संवाद • Comments (0) • 628
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दिइने शिक्षण–कला सम्बन्धी तालिम¬¬ शिक्षकको निजी प्रयोजनका निम्ति नभई विद्यार्थीको सिकाइ सुर्धानका लागि हो । अर्थात् शिक्षक तालिम विद्यार्थीसम्म पु¥याउन, विद्यार्थीलाई लाभान्वित तुल्याउन राज्य–समाजले शिक्षकलाई सुम्पिएको नासो हो । शिक्षक त्यो नासो बोक्ने वाहक मात्र हुन् । नासो जसको हो उसैलाई बुझइदिनु सामाजिक नैतिकता हो । तर, शिक्षण–कला सम्बन्धी तालिमको सन्दर्भमा नासो सम्बन्धी प्रचलित सामाजिक मान्यता र नैतिकताको परिपालना हुन सकेको छैन ।
शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत प्रगति र लाभका निम्ति शिक्षक तालिमको उपयोग जति धेरै गरेका छन्, सिकाइ उपलब्धि सुधार्नको निम्ति त्यति नै कम उपयोग गरेका छन् । शिक्षक तालिमसम्बन्धी अनुसन्धानले यस्तै देखाउँछ । औपचारिक आँकडा अनुसार, शिक्षकहरूलाई तालिममा सिकाइएका ५० प्रतिशत जति सीप मात्र कक्षाकोठामा उपयोग हुने गरेका छन् भने बाँकी ५० प्रतिशत सीप व्यर्थमा खेर गएका छन् । यसको अर्थ शिक्षण सीप सिकाउन गरिएको लगानीको आधा हिस्सा त्यसै बर्बाद हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा अनुसार २०२८ सालदेखि अहिलेसम्म शिक्षण तालिमका निम्ति सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर (झ्न्डै रु.१५ अर्ब) खर्च गरिसकेको छ ।
हाल कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरू नै यस्तो तालिम पाउनेमा पर्छन् । यसका अतिरिक्त, चार वर्षअघि शुरू गरिएको टीपीडी तालिमका निम्ति वर्षेनि रु.५० करोड बजेट खर्च भइरहेको छ । शिक्षकले सिकेका आधा सीप मात्रै कक्षामा पुग्ने आधारमा यो ५० करोडको आधा (रु.२५ करोड) आज पनि व्यर्थमा खेर गइरहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
आखिर तालिममा सिकाइएका शिक्षण सीप कक्षाकोठासम्म किन पुग्दैनन् त ? यसो हुनुमा शिक्षकको योग्यता, इमान्दारी, जाँगर, दक्षता, प्रवृत्ति, नैतिकता आदि बाहेक विद्यालयको समग्र वातावरण, प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिहरूको भूमिकाका अतिरिक्त स्वयं तालिमको प्रकृति र गुणस्तर कति जिम्मेवार छ ? के तालिममा सिकाइएका सबै सीप शिक्षकले सिक्न सकेका छन् ? के शिक्षकलाई तालिम दिने प्रशिक्षकहरू योग्य, उत्साही, जाँगरिला र सिपालु छन् ? कतै तालिम आफैं अधुरो र त्रुटिपूर्ण त छैन ? अनि तालिम दिइसकेपछि कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक साधन–स्रोत, मार्गदर्शन, अनुगमन–निर्देशन, दण्ड–पुरस्कार आदि उपलब्ध गराउने दायित्व कसैले निर्वाह गरिरहेको छ कि छैन ? यसपटक हामीले यी र यस्तै प्रश्न मार्फत शिक्षक तालिमको उपादेयता, अवस्था र चुनौती सम्बन्धी बहसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौं । यस्तै, बहस र मन्थन मार्फत शिक्षक तालिम कक्षामा नपुग्नुका कारण पहिल्याउन सफलता मिल्ने विश्वास लिइएको छ । 